Ingabe i-Adobe SiteCatalyst Losing Steam? | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 2, 2012 NgoLwesine, Februwari 25, 2016 Douglas Karr
Sinamakhasimende ambalwa ku-Adobe SiteCatalyst… kepha anginasiqiniseko sokuthi mangaki athanda ngempela ipulatifomu nokuthi mangaki ahlela ukukugcina. I-SiteCatalyst, njengamanye analytics amapulatifomu, nciphisa inani lokuvakasha abazogcina imininingwane kukho - okuyinkinga enkulu kunoma ngubani okhwehlela imali enkulu yohlelo lwebhizinisi. Futhi njengoba i-Adobe ibagwinyile, kubonakala sengathi akuyona inkampani efanayo.
Bengilangazelela lokhu futhi ngabheka ezinye izitayela zokusesha. Njengoba amathemba nabasebenzisi besebenzisa ipulatifomu, bathambekele ekubafuneni ngaphezulu. Kulokhu, ukuseshwa kwe-Site Catalyst ne-Omniture kubukeka sengathi kuthrendela phansi. Akungabazeki ukuthi iGoogle Analytics ibahlafuna bonke laba bathengisi - kepha i-Omniture beyehlukile isikhashana. Abasebenzi babo abaqeqeshiwe bekufanele ukutshalwa kwemali ngoba baqhubeka nokusiza amaklayenti abo ukuthi akhule. Angiqiniseki ukuthi lokho kusenzeka futhi.
Ababonisi abangabathengisi abanjengami mhlawumbe abasizi, futhi. Angikukhathaleli ukusebenza neSayithiCatalyst, kepha amaklayenti esinawo awenzi lutho olubabazekayo ngawo. UChaCha wenze okunye ukuhlaziywa okuhle ngesifunda sekhasi ukuze bazi ukuthi yikuphi okuqukethwe okuhehayo nokugcina izivakashi eziningi… kepha noma lokho kungenziwa ngeGoogle uma kudingeka.
I-SiteCatalyst inikeza ukuhlanganiswa okuqinile kweselula, kwezenhlalo kanye nevidiyo… kepha lokho akusuye umehluko nhlobo. Isici esisodwa i-SiteCatalyst engabonakala njengoshintsho lomdlalo ukugeleza komsebenzi:
I-interface enembile yomsebenzisi-Veza imininingwane esemqoka yokuthengisa online ngokushesha futhi kalula.
Ukutholakala kwesikhathi sangempela-Finyelela idatha kusuka ku-iPad yakho. Skrolela, swayipha, uphinde usondeze ngezikhathi ezithile. Faka amamethrikhi amasha noma imibiko ye-imeyili ngokuthinta okulula.
Izinqumo ezizenzakalelayo — Setha isaziso esizenzakalelayo sezimbangela zomcimbi lapho amamethrikhi abalulekile edlula noma ewela ngaphansi kokulindelwe.
Ucabangani? Ngabe uyinkampani eyashiya i-Adobe SiteCatalyst? Ingabe i-Analytics yinto ositshala kuyo futhi? Ngokubona kwami, kuncane mayelana nepulatifomu nokuningi ngenkampani ekusizayo uphumelele. Ngemuva kokusebenza ngqo nabantu baseWebtrends, ngiyazi ukuthi bakhathalela kangakanani amaklayenti abo. Ukusebenza namakhasimende we-SiteCatalyst, anginaso isiqiniseko sokuthi ngake ngakhuluma nomphathi we-akhawunti ye-Adobe!
Tags: adobei-adobe sitecatalystukukhishwaumagazine
Ukulungisa Amakhompyutha ePortland
I-Oct 2, i-2012 ku-2: i-12 PM
Ngizothembeka, ngicabanga ukuthi i-Adobe ilahlekelwa ngumhlabathi omningi ngenxa yezinkinga ze-Adobe Flash. Yize ngazi ukuthi amawebhusayithi asuka kude nalokhu, kusenokuningi kakhulu okufanele kufinyelele. Unabasebenzisi abaningi abakhungathekile laphaya. Ngenkathi amaphakheji wedizayini emuhle… ukuthwalwa ngizwa sengathi kuthinta isimo
Okthoba 16, 2012 ngo-7: 03 AM
Lowo mkhuba obonwe kahle ngokuqinisekile. Ku-LVMetrics, sisebenza kakhulu namakhasimende aqhubeka ngokuqaphela amandla we-Google Analytics lapho esetshenziswa futhi esetshenziswa kahle. Ukucabanga akusekho ngisho ngentengo, kubonakala sengathi kuyazi ukuthi kunolwazi oluningi kakhulu olungasetshenziswa ngokunenzuzo kusuka kuthuluzi leWeb Analytics futhi lokho, iGoogle Analytics isebenza kahle. Izicelo ezinamandla zingakhiwa kusetshenziswa i-Google Analytics API kufaka phakathi ama-analytics ezingeni lezivakashi - into okudala ukuthi i-Omniture iyiphuzu lokuthengisa eliyingqayizivele. Ukukhetha kubila impela ekuqhathaniseni phakathi kwezici 'zokuphuma ebhokisini' ze-SC, kuqhathaniswa nokulandela ngomkhawulo kwe-GA + ukubonisana okuncane, umlingo wedatha ne-ETL. Lesi sakamuva siphumelela ezandleni.